घर र परिवार, पिता
नागरिक विवाहको बढ्दो लोकप्रियता झन् केही समस्या छन् संग। यस्तो विवाह बच्चाहरु जन्म भएकोले अक्सर पितृत्व स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ। जब भविष्यमा बुबा मरेपछि विशेष कठिनाइ उत्पन्न। जवान आमा कहिलेकाहीं मृतक बच्चा अनुहार संग सम्बन्ध प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एक केटी व्यवस्था गर्न चाहन्छ बच्चा समर्थन बाचेको व्यक्ति वा यसको नागरिक पति को विरासत दाबी।
स्थापना पितृत्व को तरिका
त्यहाँ पारिवारिक सम्बन्ध परिभाषित जोडी विवाह छैनन् जब तीन विधिहरू छन्। तिनीहरूले प्रक्रिया र अनुक्रम को मामला मा फरक। निम्न तरिकामा पितृत्व स्थापना:
एक अदालतले निर्णय मद्दत संग;
अदालत को मद्दतले posthumous पितृत्व।
kinship को स्वैच्छिक पहिचान
यसलाई दर्ता सम्बन्ध नागरिक spouses को मामला मा सेट गरिएको छ। सँगै तिनीहरूले पितृत्व (प्रसूति यसरी स्वतः रेकर्ड) को स्वीकृति मा रजिस्ट्री कार्यालयमा आवेदन पेश गर्नुहोस्। बच्चालाई आमा या त मृत्यु भने, वा त्यो परीक्षण पछि अभिभावकको अधिकार deprived थियो या त्यो विशेषज्ञहरु को निष्कर्षमा द्वारा अयोग्य फेला परेन, त्यसपछि बुबाले सान्दर्भिक अधिकारीहरु सहमति मात्र लागू हुन सक्छ। यो guardianship को अनुमति लिन महत्त्वपूर्ण छ।
कहिलेकाहीं एक बच्चाहरु को जन्म पछि केहि परिस्थितिमा आमाबाबुले सँगै लागू गर्न सक्दैन। त्यसपछि, यो जन्म अघि registrar कार्यालयमा खुवाउनुभयो छ प्रदान।
जब बच्चा पुग्छ पितृत्व प्रक्रियाको उमेर मात्र पहिलो को अनुमति बाहिर छ।
पितृत्व को न्यायिक अठोट
अक्सर आरोप बुबा उनको सानो बच्चा पहिचान गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन अवस्थामा छ। यहाँ, आमा मात्र अदालतले आदेश द्वारा न्याय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पारिवारिक कोड मार्च 1996 मा केही परिमार्जन गरे। त्यसैले एक बच्चा पछि परिवर्तन जन्म भएको थियो भने, पितृत्व को स्थापना को आरएफ आईसी को धारा 49 द्वारा शासित छ। अदालत प्राप्त एक बयान मा भने व्यक्ति बच्चालाई जन्म पुष्टि गर्छ कि सबै प्रमाण जाँच्न पर्छ। सबै सम्भव प्रमाण को आरएफ आईसी को धारा 55 मा सूचीबद्ध।
बच्चाहरुका लागि, प्रक्रिया अन्य पक्षहरू मा बाहिर। यस मामला मा, अदालत यसको निर्णय मा परिवार कोड को धारा 48 द्वारा निर्देशित गरिनेछ। यहाँ वादी अर्थव्यवस्था को समग्र व्यवस्थापन, साथै गर्भावस्था को समयमा spouses को नागरिक cohabitation र त्यसपछि बच्चा संयुक्त जन्म प्रमाणित गर्छ। पितृत्व को स्थापना कानुनी रूपमा अवधि प्रदान गरिएको छैन सीमा को। अदालत कुनै पनि समयमा एक बच्चाहरु को जन्म पछि पहुँच गर्न सकिन्छ।
मृत्यु पछि पितृत्व
Posthumous पितृत्व मात्र अदालतले आदेश द्वारा बाहिर छ। यो जीवन मा बच्चा जन्मिएको मृत व्यक्तिको महत्वपूर्ण पहिचान छैन। आफ्ना बुबाको मृत्यु पछि पितृत्व मात्र मृतक व्यक्ति को जन्म तथ्यलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण को प्रावधान पछि सुरु हुन्छ। यस मामला मात्र मार्च 1996 अघि जन्म बच्चाहरु लागू हुन्छ।
अदालत पनि थप लामो-गणनामा विवाद ठान्नुहुन्छ। बच्चा 1 भन्दा अगाडि जन्मिएको छ भने अक्टोबर 1968, अदालत भने अझै पनि समय मा एक सानो आफ्नो मृत्यु अघि आरोप बुबा मा पूर्ण निर्भर थियो प्रमाण हो एक मृतक व्यक्ति को पितृत्व बुझेका छन्।
affinity को स्थापना को लागि कारण
त्यहाँ posthumous पितृत्व entail मात्र दुई कारणहरू छन्।
बच्चाहरु को आमाबाबुले कानुनी रूपमा आरोप बुबाको मृत्युको समयमा विवाह गर्दा आफ्नो बच्चा को दोषी छैन।
आफ्नो मृत्यु अघि एक मानिस पितृत्व स्वीकार, तर दम्पतीले छ वा आधिकारिक विवाह भएको छैन बच्चालाई को जन्म को समयमा भने।
अदालत मा दावी दाखिल
kinship आवश्यक दावी स्थापना मा अदालत गर्न कथन, आमा बाहेक केही थप व्यक्ति लागू गर्न सक्नुहुन्छ। अदालत लागू गर्ने अधिकार छ:
संरक्षकको, आधिकारिक जहाँ बच्चा बहुमत को उमेर पुगेको छैन मामला मा पुष्टि;
बच्चालाई कसैको खर्च छ भने, त्यसपछि एक सानो भएको व्यक्ति मुद्दा हाल्न;
उमेर 18 वर्ष पुग्नु मा, अदालत बच्चा द्वारा दावी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रमाण अदालत यसको निर्णय गर्दा खातामा लिन्छ कि
पारिवारिक कोड को लेख 55 पितृत्व स्थापना मा अदालत पेश गर्न को वादी सक्छ सबै स्वीकार गर्न सकिने प्रमाण सूची। यी समावेश:
उहाँले बच्चाको आमा रूपमा कथित पिता लेखे, र एक सानो कि अक्षरहरू।
अप्रत्यक्ष पितृत्व प्रमाणित गर्ने मृतक व्यक्ति, को लिखित बयान। यो रेकर्ड सर्कल वा कथित पिता लगे जो खण्डहरू मा हुन सक्छ।
गवाही। अदालत छिमेकी र spouses को सम्बन्ध बारेमा कुरा गर्ने आमा, को नातेदार को विचार सुन्न हुनेछ। यहाँ, जहाँसम्म सकेसम्म संलग्न हुन र सरकारी एजेन्सीहरू, यो कुरा महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्छ।
चिकित्सा प्रमाण। पोस्ट-mortem पितृत्व एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष डीएनए विश्लेषण हो। निस्सन्देह, यो प्रक्रिया मात्र सम्भव छ भने मृतक व्यक्ति नजिक यस्तो आमाबाबु, दिदीबहिनी वा भाइहरूलाई नातेदार,।
पितृत्व लागि डीएनए विश्लेषण
यो कसरी गरिन्छ? Posthumous पितृत्व अक्सर मात्र परीक्षण पछि बाहिर छ। मिति, यस्तो अवस्थामा एकदम लोकप्रिय र अझ प्रभावकारी छन्। को पितृत्व परीक्षण मात्र अदालत निर्णय पछि र खास क्लिनिक, संकेत गरिने सञ्चालन गरिएको छ। डीएनए विश्लेषण सबै स्वच्छता र कानुनी मान्यता को सख्त उत्सव संग बाहिर छ। आफ्ना पिता व्यवसायीक को मृत्यु संग जडान अर्को Kin को biomaterials प्रयोग गर्नुहोस्। आमाबाबुले वा भाइ बहिनी पितृत्व लागि डीएनए विश्लेषण लागि biomaterial सङ्कलन लागि स्रोतको रूपमा कार्य गर्न सक्छ। साथै, विशेषज्ञहरु उहाँले आफ्नो जीवनकालमा दिनुभयो जो एक मृतक व्यक्ति, रगत परीक्षण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
पितृत्व परीक्षण एकदम सकारात्मक नतिजा दावीकर्तालाई लागि को संभावना वृद्धि हुनेछ जो 99% को एक सम्भावना, दिन्छ। यो प्रक्रिया को पूरा गरे पछि, परिणाम अदालत पठाइएको र सुनुवाइ लागि नयाँ मिति नियुक्त छन्। सकारात्मक निर्णय भने आमा वा सानो बच्चा को अन्य प्रतिनिधि सबै सान्दर्भिक कागजात को प्रतिहरू सामेल, रजस्ट्री कार्यालयमा पत्र लेखे। यी समावेश जन्म प्रमाणपत्र बच्चा को र जूरीको फैसला तल हस्तान्तरण। केही दिनमा एक न्यायिक खोजन को आधार मा आमा पितृत्व को एक नयाँ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दछ। यो कागजात संग, महिला एक breadwinner को हानि र सम्पत्तिको लागि लाभ को भुक्तानी दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
नियम र सर्तहरू एक मृतक व्यक्ति को पितृत्व को पहिचान को लागि लागू
विवरण पितृत्व को स्थापना मा, अदालतमा नालिस गर्नु सबै सरकार नियमहरु बनेको हुनुपर्छ। एक किशोर आमा वा संरक्षकको सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा थाहा छैन भने, यो एक वकील वा कानुनी सल्लाह सम्पर्क गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। किनभने, आवेदन बाहेक, तपाईंले केही कागजातहरू को प्रतिहरू बनाउन आवश्यक छ। उचित रुचाउने कोर्ट संग चाँडै आफ्नो अवस्था खातामा लिन र काम सुरु हुनेछ। एक बयान मा, आमा मृतक आरोप बुबा को डाटा र एक संयुक्त सानो बच्चा को सबै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
अदालत को विचार को लागि आवश्यक कागजात को प्रतिहरू सूची:
आफ्नो बुबाको आरोप मृत्युको प्रमाणपत्र।
एक संयुक्त सानो बच्चा को जन्म प्रमाणपत्र।
निवास को cohabitation (कुनै छ भने) बारे जानकारी।
आवश्यक दर्ता शुल्क को भुक्तानीको रसिद।
मृतक व्यक्ति को पितृत्व प्रमाण (फोटो, अक्षर, आदि)।
मृतक व्यक्ति को स्थापना सम्बन्ध आवेदन गर्न आपत्ति
यो कहिले काँही आमा मृतक को पितृत्व व्यवस्था जोडीलाई लागि आवेदन दायर कि केही विशिष्ट परिस्थितिमा जडानमा थप गम्भीर मानिन्छ हुन्छ। तिनीहरूले अक्सर, प्रति-आपत्ति बन्न सक्छ लेख्छन्। यस्तो दावी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ नजिक नातेदार वा, झन् खराब, आफ्नो आधिकारिक पत्नी।
जहाँ मृतक आरोप बुबा कानुनी रूपमा अर्को स्त्रीलाई विवाह छैन मामला मा, kinship को तथ्यलाई साथै साक्षी को मद्दतले, चित्र वा अक्षर को रूप मा प्रमाण पुष्टि भएको छ। धेरै जटिल को वैधता प्रमाणित गर्न एक मानिस कानुनी रूपमा विवाह थियो भने। सबै प्रमाण र बयान बावजुद अदालत एक डीएनए विश्लेषण अनुरोध। गतिविधिको कानुनी क्षेत्र मा विशेषज्ञहरूका अनुसार पेश आवेदन भने एक counterclaim छ, निर्णय पुगन मा अदालत मात्र विश्लेषण को परिणाम द्वारा निर्देशित छ।
सारांशमा गर्न। आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि पितृत्व स्थापना - यो एकदम troublesome छ, र कहिले काँही ठूलो वित्तीय लागत चाहिन्छ। तसर्थ, kinship दर्ता जोडी थप responsibly समावेश स्थापित गर्न। किनभने न्यायिक अभ्यास क्षण निशान एक अदालत स्थापना एक विफलता गरेकोले गर्दा। एक जवान आमा नै अवस्था मार्फत जान सजिलो छैन।
पितृत्व को इन्कार - यदि यो हुन्छ?
Dads छोराछोरीको लालनपालनमा जीत कि6कुराहरू
आफ्नै हातमा सबै नयाँ वर्ष
25 अचम्मको लाभ: यो मेरो बुबाको छोरी हुन राम्रो छ
गर्भावस्था को समयमा Coagulation - एक आवश्यक चरण रगत परीक्षण।
मशरूम। रूस को लाल बुक
रोमको जनसंख्या। वर्णन, शहरको विवरण
जवान विशेषज्ञ शिक्षकहरू समर्पण: लिपि
टर्की, एक स्पा शहर। टर्की मा सबै भन्दा राम्रो रिसोर्ट्स: विवरण, फोटो, समीक्षा
"Polizhinaks": समकक्षों। राम्रो छ - "Terzhinan" वा "Polizhinaks"?
बच्चा मा मानवअधिकार आदर्श। हामी सही नाडी मापन
Hyperopia: बच्चाहरु र वयस्क को उपचार
प्राथमिक आगो बुझाने मतलब: सामान्य आवश्यकताहरू
शुभ प्रभात, मेरो प्रिय!